Erayga Nabadiidkaad la Shaqaysaa Goormuu ka Dhamaan Degaanka Somalida Ethiopia? – Rasaasa News
Erayga Nabadiidkaad la Shaqaysaa Goormuu ka Dhamaan Degaanka Somalida Ethiopia?
Sep 10, 2011 dabadeedna lagu gaydhanayo xubno muujiyey horjeed sabab keentayba., Erayga Nabadiidkaad la Shaqaysaa Goormuu ka Dhamaan Degaanka Somalida Ethiopia?, in mindiyo ay isu lisanayaan masuuliyiinta degaanka Somalidu, Warka duub oo waxaad moodaa
Jijiga, Sep 10, 2011 [ras] – Horay waxaa Ethiopia looga mamnuucay Erayga “Somali Qushaashaa” kaas oo dhamaaday 1977. Xadhiga iyo xangaruufada lagu hayo xoogsatada [shaqaalaha] u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia, goorma ayey ka waantoobi masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia, yaase looga dacwoodaa?
War aanu ka helay xarunta degaanka Somalida Ethiopia ayaa sheegaya in hoolka shirarka ee Sayyid Maxamed Cabdile Xasan lagu xareeyey [habeenimadii bisha september 5] shaqaalaha dawlada, ka dibna qaarkood lagu eedeeyey in ay la shaqeeyaan nabadiidka, deedna la xidhay.
Qodobada la waydiinayey shaqaalaha dawlada ee xadhiga keenay, ayaa ahaa aragtidooda ku aadan horumarka, nabad galiyada, shaqada Liyuu Booliska iyo Somalinimada.
Labo culimo oo ka mid ah shaqaalaha dawlada, ayaa aroortii [sep 6] lagu riday xukun deg dega oo ah 12 sano iyo 20 sano oo xadhig ah [Sh.Jaamac Cali Guuleed iyo Sh. Nadiir Sayid Nuur] sida ay u kala horeeyaan. Iyaga oo lagu eedeeyey in ay diinta wax ka sheegeen, abaabulayeyna dagaal ka dhan ah dawlada.
Waxaa kale oo la xidhay walina xukun lagu ridin saddex shaqaale dawladeed ah, oo lagu eedeeyey in ay la shaqeeyaan nabad diidka [ 1. Yuusuf Bade, 2. Cabdulaahi Qaasim, 3. Cabdiraxmaan Salaad].
Qiimayn joogta ah oo qasdi leh ayaa labdii biloodba waxay ka dhacaan xarunta dawlada degaanka Somalida Ethiopia, saddexdii biloodbana waxaa shaqada laga caydhiyaa shaqaale badan oo lagu sheego in ay nabad diidka la shaqaynayeen.
Waxaa kale oo saddexdii biloodba jagooyinka loo kala wareejiyaa dhamaan masuuliyiinta gabalada iyo degmooyinka oo iyaga oo aan wali fahmin masuuliyada loo dhiibay laga dhuftaa. taasi dhibaato ahaa!
Dhinaca kale shaqaalaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa markii si aan sharciga waafaqsanayn shaqadooda looga caydhiyo waxay naftooda ku canaantaan maxaan kol hore nabad diidka u raaci waayey. Niyad jabka loo gaysto ruux aan waxba galabsan waxay galaafataa umad dhan, waayo cadaalad darado ayaa sugaysa ruux walba.
Muddo ay bil inaga xigto ayey ahayd kolkii dawlada federaalka Ethiopia iyo qaybtii ugu shacbiyada badnayd ururka ONLF, heshiis nabadeed ku kala saxiixdeen xarunta Ethiopia ee Addis Ababa.
Heshiiska ka dib, waxay dareemeen dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia saxan saxo nabadeed iyo nafis, markii ugu horaysay muddo 16 sano ah. Waxaa qoryihii ay siteen dhigay intii badnayd ciidamadii Jabhada, qaarna waxay ku qasbanaadeed in ay galaan dalalka dariska ah.
Waxaa dibad iyo gudaba is dhaaf dhaafay dadweyne u dhashay degaanka Somalida Ethiopia oo u riyaaqaya nabada ka dhacday degaanka, kuwaas oo doonay in ay ka qayb qaataan horumarinta dalka.
Wufuud badan oo ka tagtay degaanka Somalida ayaa damaashaadyo kala qayb galay qurba joogta ku nool dalalka dibada, kalsooni ayaa meel walba ka dhacday.
Waxaa lagu balamay dhamaan in talaabada xigta ay noqoto Jwxo-shiil iyo inta yar ee la socota oo lagu waaniyo wanaaga iyo in horumar loo jeedsado, si loo badalo nolosha dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa la filaayey in nabad diidku uusan ku noolaan doonin degaanka, dadweynaha ay naxariistu u soo noqotayna ay noloshoodu is badali doonto. Waxaadse moodaa in Erayga Nabadiid uu ka xoogaysanayo dhinaca maamulka degaanka oo kaliya, laakiin uusan ka jirin dalka iyo dibada midna. Waxaana la gaadhay xiligii ay dawlada wadaagu mamnuuci lahayd ku qadhaabashada Erayga Nabadiid.
Qiimaynta shaqaalaha dawlada degaanka lagu sameeyey bishan, ayaa lagu helay xubno nabadiidka la shaqaynayey oo ay ciidanka sir doonku sheegeen, waana la xidhay! Isu habooni daranaa. Maxaa shirba keenay muu boolisku qabto oo inta dacwad ku oogo maxkamad la geeyo?
Ciidanka sir doonka dambiile in ay qabtaan oo ay baadhaan bay u dhisan yihiin, laakiin shir kuma soo bandhigaan sirta ay hayaan. U ekaa in ayna Booliska iyo masuuliyiinta midkoodna rabin in nabad diid dhamaando.
Dhawaan ayey dawlada Ethiopia qabtay 29 oo lagu eedeeyey in ay argagixiso ahaayeen, dadkaas booliska ayaa qabtay, waxaana ku socota baadhis, nidaamka dawliga ah ayaana loo maray.
Waxaa wax laga yaabo ah in masuuliyiinta dawlada degaanku, ay sida digaagii shaqaalaha qol ku xareeyaan deedna yidhaahdaan hebel iyo hebel nabad diidkaadka ayey la shaqeeyaan, deedna isla goobta lagu xidho. Taasi wax wanaag ah uma keenayso degaanka Somalida.
Sumcad xumada waxaa ka daran dadka ayey bayni bixinayaan masuuliyiinta dawlada degaanka Somalidu, waxayna abuurayaan nacayb iyo colaad ka bilaabta degaanka Somalida Ethiopia, haday taasi jirto …..
Shaqaalaha dawlada waxaa lagu shaqaaleeyaa xeer [code of conduct], waxaana haboon in loo maro xeerka iyo nidaamka dawladnimo, wixii dambi ah ee uu ruuxu galana haydaha garsoorka la mariyo.
Warka duub oo waxaad moodaa, in mindiyo ay isu lisanayaan masuuliyiinta degaanka Somalidu, dabadeedna lagu gaydhanayo xubno muujiyey horjeed sabab keentayba.
Jwxo-shiil oo Markii Ugu Horaysay Kulan Yar ku Qabtay London
Ethiopia oo Cafiday in ka Badan 9,000 oo Maxbuus